म कलाकार भन्दा पहिला लेखक हुँ - कलाकार हरिवंश आचार्य - साहित्य - साप्ताहिक
म कलाकार भन्दा पहिला लेखक हुँ - कलाकार हरिवंश आचार्य
'हरिबहादुर' लेख्दाको कुनै रोचक प्रसंग ?
चिना हराएको मान्छे लेख्दा–लेख्दै म बेलाबेला रुन्थें । आँसु खसेर कापीमा लेखिएका अक्षरहरू फुल्थे । लेख्दा–लेख्दै रोकिन्थें । म त्यतिबेला बियोगमा थिएँ । हरिबहादुरमा वियोगका कुरा थोरै छन् । कति ठाउँमा हाँसो उठ्यो । रमाइलो लाग्यो । यसमा दुई वर्षको समय खर्चिएको छु तर यसबीच थुपै्र कार्यक्रम गरियो । स्क्रिप्ट लेखियो । बचेको समयमा लेखियो ।
चिना हराएको मान्छेले दोस्रो पुस्तक लेख्ने प्रेरणा दियो । स्वदेश भित्र अनि संसारका अन्य कुनामा पुग्दा ‘तपाईंको पुस्तक पढें’ भन्ने धेरै नेपाली भेटिए । चिना हराएको मान्छेका पाठकहरू नै हरिबहादुरका लक्षित वर्ग हुन् । ग्रामीण महिला, गृहिणी महिला, कलेजका विद्यार्थीहरू, घरेलु कामदार, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू मेरा ठूला पाठक हुन् । फाइन प्रिन्टका भाइहरूबाट सुन्छु, ‘दाइको पुस्तकले धेरै पाठक बढायो ।’ योभन्दा गर्वको कुरा हरू के हुनसक्छ र ?
मैले रंगमञ्चमा खुट्टा टेक्नुअघि नै कलम समात्ने, स्क्रिप्ट लेख्ने काम गरेको हुँ । अहिलेसम्म जति पनि कार्यक्रम बनाइयो, त्यसलाई सबैभन्दा पहिले लेख्ने काम नै गरिन्छ । सुरुमा कलम र कापी समाइयो । कलाकार बन्नुभन्दा अघि लेखक बनेको हो । अरूले मान्यता दिनु–नदिनु फरक कुरा हो । गाउने पनि हो, लेख्ने पनि हो, अभिनय पनि गर्ने हो, निर्देशन पनि गरेको हो । कतिपय ठाउँमा नजानी–नजानी संगीत भरियो । सबै कुरामा खुट्टा टेकियो । बहुरंगी भने पनि हुन्छ । मलाई जे दर्जा दिए पनि हुन्छ । म त्यसलाई शिरोधार्य गर्छु ।
पढ्न थालेको छु । बजारमा आएका नयाँ पुस्तक प्राय: छुटाउँदिन । पछिल्लो पटक मैले ऐना तथा सरसर्ती संसार पढें । त्यस्तै उल्था गरिएका पुस्तक मोहनदास, नेलकटर अनि खबुजले पनि मेरो मन छोए । मागेरभन्दा किनेर पढ्ने बानी छ । महिनाको १/२ हजार रुपैयाँ पुस्तकमै खर्चन्छु ।
लेखन र अभिनय बाहेक तपाईंको सोख केमा छ ?